Wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada XFS oo ka qeyb galay munaasabad ku qalin jabinayeen 25 ardey oo bartay culuumta badda – Wasaarada Waxbarashada , Hiddaha & Tacliinta Sare
Wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada XFS oo ka qeyb galay munaasabad ku qalin jabinayeen 25 ardey oo bartay culuumta badda
Wasiir ku xigeynka wasaaradda waxbarashada Hiddaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya , Mudane Feysal Cumar Guuleed ayaa maanta magaalada Muqdisho uga qeyb galay munaasabad ay ku qalin jabinayeen dufcadii 3aad ee dugsiga tababarka Akadeemiyadda culuumta badda iyo qawaaniinteeda.
Tirada ardeyda ka qalin jabisay Akadeemiyadda culuumta badda iyo qawaaniinteeda ayaa gaaray 25 ruux kuwaasoo muddo la barayay culuumta badda iyo qawaaniinteeda.
Munaasabadda ayaa waxaa sidoo kale goob joog ka ahaa gudoomiyaha hay’adda cilmi barista badaha Soomaaliyeed Admiraal Faarax Qare saraakiil ciidan iyo marti sharaf kale .
Mudane Feysal Cumar Guuleed ayaa sheegay in wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ay ka go’an tahay sidii dib u dhis loogu sameyn lahaa dugsiyadda farsamada gacanta ee ku yaalla dalka si loo helo dhalinyaro xirfad leh.
“Wasaaradda waxabarashada waxay dib u dhis ku sameyneysaa dugsiyadda farsamadda gacaanta waxana lag dhisi doonaa dhamaan dalka si ay ug faa’ideystaan dadka Soomaaliyeed kawasaarad ahaan wajib ayaa naga saran horumarinta waxbarashada dalka”ayuu yiri wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashadda Feysal Cumar Guuleed.
Wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa dadaal ugu jirta sidii loo horumarin lahaa aqoonta dadka Soomaaliyeed islamarkana loogu abuuri lahaa xirafado ay ku shaqeystan.